बीमीतलाई छिटो र छरीतो सुविधा प्रदान गर्दैछौ: कुमार बहादुर खत्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अजोड इन्स्योरेन्स – Insurance Khabar
बीमीतलाई छिटो र छरीतो सुविधा प्रदान गर्दैछौ: कुमार बहादुर खत्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अजोड इन्स्योरेन्स
प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७५, आईतवार ११:०५
कुमार बहादुर खत्री, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अजोड इन्स्योरेन्स
त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट एमबीए गरेका कुमार बहादुर खत्रीले बीमा क्षेत्रमा आउनुभन्दा अघि खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय थिए । करिब ७ बर्ष खेलकुद क्षेत्रमा विताए पछि विस २०४९ सालमा सरकारले उहाँ आवद्ध रहेको खेलकुद परियोजना नै खारेज गरिदिँदा त्यहाँ कार्यरत चारसय कर्मचारीले अवकास लिनुपरेको थियो । जसमध्येमा उनी पनि एक हुन् ।२०५१ साल फाल्गुण ८ गते नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बिकाश अधिकृत हुदै इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए खत्रीले । त्यहाँ उनले ९ वर्ष काम गरे । एनबि इन्स्योरेन्स (हालको आईएमइ जनरल इन्स्योरेन्स) को ब्यबस्थापकीय तहमा २ वर्ष काम गरे र २०६२ साल श्रावण देखि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको सहायक महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हाले । जहाँ उनले १३ वर्षसम्म काम गरे । हाल उनी अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा कार्यरत छन् । उनै खत्रीसँग बर्तमान बीमा बजारको अवस्था र कम्पनी रणनीतिको बारेमा इन्स्योरेन्सखबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार:
हाल निर्जिवन बीमाको बजार कस्तो छ ?
हाल निर्जिवन बीमाको बजार बढीरहेको छ । चार, पाँच वर्ष अघिको बजार र हालको बजार हेर्ने हो भने यसका केही परिवर्तन आएको छ । केही बर्ष अघि छ/सात अर्बको बजार रहेको थियो भने १० बर्षसम्मको अवधीमा आईपुग्दा २२ अर्ब रुपैयाँमा आईपुगी सकेको छ । बजार बढ्न अझै बाँकी रहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिईरहेको छ । यो अझै पनि जुन रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो भईसकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई अझै सबै विस्तार गर्न सकियो भने बीमा बजारलाई अघि बढाउन सहयोग गर्दछ । सरकारको स्थायी सरकारमा आएर बिकास निमार्णको काम भयो भने बीमा बजार बढेर जाने लक्षण देखिन्छ । सरकारले सम्पूर्ण विकास निमार्णको कार्यहरुमा बीमा गनुपर्ने निती राखेको छ । ठूला हाईड्रोपावर, पोजेक्ट, विकास निर्माणको काम र बीमा बजार १२ प्रतिशत मात्र रहेको हुदाँ अझै बीमीतको दायरा बढाउने प्रशस्त ठाँउ रहेको कारणले गर्दा बीमाको बजार उज्जवल नै छ भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा पहिलो नै १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यसैबिच सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीले बजारमा आफुलाई स्थापित गराउँन कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
बीमा बजारमा नयाँ तिन वटा कम्पनीहरुको थपिदाँ यसले बीमा बजारलाई खासै असर गर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । यसले अझ बीमा बजारलाई बीमा बजारलाई अघि बढ्न सहयोग गर्दछ । बीमाको बजार हाल १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। बीमाको दायरा नभएको ठाँउमा यसले सहयोग गर्दछ । बीमा बजार विस्तार गर्न सम्भावनाहरु अझै धेरै रहेको छ । कतिपय ठाउँहरुमा बीमाको दायरा पुगेको छैन । बजार रहेको छ बीमाको बजारलाई पहिल्याउन सकेमा बीमा बजार अझै राम्रो रुपमा अघि बढ्ने पाटोहरु थुपै रहेको छ । प्रतीस्पर्धा आफनो ठाँउमा रहेको छ । हामीले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा बीमीतलाई दिने कुरामा हामी लागि रहेका छौ । हामीले यसलाई प्राथमिकता दिईरहेका छौ । प्रविधीको प्रयोग मार्फत अनलाईन सेवाको कुरालाई पनि हामी अघि बढाउने सोचमा रहेका छौ । वास्तवमा अहिलेको बीमा बजार त बजार नै हैन । यसलाई नयाँ कम्पनीको विस्तार सगैँ बीमा पहुचँ वृद्धि र बीमाको दायरा बढाउने एक माध्यम बनेको छ ।
हामी प्रविधिमैत्रीमा जान्छौं, हामी प्रविधिमा बढी आधारित हुने भएकाले प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह हुन्छ । हामीले प्रविधिमा नै जोड दिइरहेका छौं । छिटो छरीतो सेवा प्रदान गर्न दिने र गुणस्तरीय सेवा र समयमै दाबी भुक्तानी तय गर्न वातावरण गराउने जस्ता कारणले हाम्रो कम्पनी अन्य कम्पनीको तुलनामा फरक रहेको छ ।
जनरल इन्स्येरेन्सको लागत अलि बढी भएको हुन्छ । त्यसैले पनि होला । तर हाम्रो कम्पनीले यही बर्ष भित्र विभिन्न ठाँउहरुमा २६ वटा शाखा खेल्ने तयारीमा रहेका छौ । त्यस पश्चात् हामी तिन, चार वर्ष भित्र हामी ५६ वटा शाखा खेल्छौ । यसै गरि विभिन्न स्थानहरुमा बीमा काउन्टर खेल्छौ । भोलिका दिनमा पनि हामीले दुर्गम क्षेत्रमा बीमा समितीसगँ सहकार्य गरेर ग्राहकहरुलाई सेवा सुविधा दिने तयारीमा रहेका छौ । कृषि बीमा वा लघु बीमालाई लिएर हामी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जादै छौ ।
तपाई लामो समय देखी बीमा क्षेत्रमा हुनुुहुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले अझै पनि समयमा दाबी भुक्तानी गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ । तथ्याकले पनि त्यहि देखाउँछ ? यसको कारण के होला ?
यसमा सर्भयर बीमा कम्पनी र बीमीतको पनि केही कमी कमजोरी भएको देखीन्छ । ती कुरामा हाम्रो कम्पनीले दाबी भुक्तानीको लागि चाहिने अत्यावश्यक डकुमेन्ट मात्र लिन वातावरण दिने व्यवस्था गदैछौ । यसमा हामी बीमीतको निगरानी पनि गरीरहेको हुन्छौ । हाम्रो कम्पनीको स्थापनाको भएको दिन पश्चात् एक जना बीमीतलाई दाबी परेको थियो । हामीले २४ घण्टा भित्र हामीले बीमीतलाई चेक प्रदान गरेका थियौ । मेरो विचारमा बीमा गर्न बेलामा हामी उहाँहरुलाई भोलिको दिनमा दाबी परयो भने यस्ता किसीमका डकुमेन्ट आवश्यक पर्दछ भनेर हामी उहाँहरुलाई सजग गराउछौ । यसका साथै आवश्यक डकुमेन्टका साथ दाबी गरेमा भुक्तानीमा त्यस्तो समस्या भने आउदैन ।
अबको दिनमा त्यस्तो समस्या नआउला, जुन हिसाबमा बीमा कम्पनीको वृद्धि भईरहेको त्यो अनुरुपमा दक्ष जनशक्ति अभाव भईरहेको थियो । हामीले नै पनि हालको दिनमा केही पूराना जनशक्तिलाई लिएका छौ र धेरै पूरानालाई जनशक्ति नै लिई रहेका छौ । बीमा कम्पनी र बीमा समितीको सहकार्यमा हामीहरुले नेपाल इन्स्योरेन्स तालिम केन्द्र खोलेका छौ । यो एउटा कम्पनीको रुपमा दर्ता हुदैछ । यसमा कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भयर र इन्स्येरेन्सको पाठ्यक्रम नै बनाएर अघि बढ्ने सोचमा छौ यसले गर्दा भोलिको दिनमा दक्ष जनशक्ति अभाव कम गर्न सहयोग गर्दछ ।
अब आउने विधेयमा बीमा प्राधिकरण बन्दै छ । बीमा प्राधिकरण बनीसके पछी जुन अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो अधिकार मन्त्रालयले बढी लिएको हो की भन्ने भान परेको छ । यो कुरामा सुधार गनुपर्छ । सर्भेयरहरुलार्ई ऐनमै यती पैसासम्म जरीवाना राख्ने भन्ने कुरा राखेको छ त्यो कुरा त्यक्ति ठिक होईन कि जस्तो लाग्छ । यसका साथ–साथै हाल बहसमा आईरहेको कुरा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता राखीएको छ । हामी एउटा कर्मचारी लिदाँ त पढाईको साथ–साथै अनुभव खोज्छौ भने सस्थामा रहेको प्रमुख तहमा रहेको व्यक्तिलाई डिग्री पास गरेको राख्ने भन्ने कुरा भएको छ । कुनै पनि व्यक्ति डिग्री पास गरेर मात्र उसमा काम गर्न स्थिती रहदैन यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखीन्छ ।
मोटर बीमामा नक्कली पोलिसी नै जारी भएको देखियो । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
मोटर बीमामा नक्कली पोलिसी भन्ने कुरा त हुदैन होला । दुर्घटना पछी बीमा गराउने परिपाटी देखीएको छ । यसलाई सुधार्न सकिन्छ । एउटा त बीमा गर्दा राम्रोसगँ अन्डराईटिङ गर्न हो भने यसमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
बीमा बजार विस्तारै बढ्दै गईरहेको छ ।नेपालको सन्र्दभमा हेर्ने हो भने बैंकबाट ऋण लिएको छ भने बीमा गर्न चलन रहेको छ । जग्गाको धितोले भ्यायो भने घरको बीमा नगर्ने चलन पनि रहेको छ । नेपाल सरकारले केही वर्षको लागि दुई, तिन वटा ठाउँहरुमा हेनुपर्ने जरुरी देख्छु । मालपोत गर्न ठाँउमा, नक्सा पास गर्न ठाँउ, सम्पतिको कर तिर्ने ठाँउमा, बहाल लगाउने ठाँउमा हेरिदिने हो र यसमा बीमा खोजिदिने हो भने र बीमाको हदमा उसको करको पनि छुट गर्न व्यवस्था गर्ने हो र यसमा बीमा अनिवार्य नै गर्ने होे भने बीमाको बजार निकै माथि जान्छ । यसले बीमा कम्पनीलाई मात्र नभई राष्ट्र निमार्णमा पनि फाईदा पुुग्दछ पूँजी निर्माण पनि हुन्छ । बीमाको दायरामा सम्पूर्ण मानिसलाई समेट्न सकियो भने भोलिका दिनमा केही क्षती भएमा बीमीत आफैले बीमा गरेको हुदाँ सरकारलाई अनुदानको भार पनि कम पर्न जान्छ ।
कम्पनीको तर्फ बीमा चेतना बढाउँन तपाईहरुले के गर्ने योजना बनाउँनु भएको छ ?
हामीले कम्पनीको बीमा चेतना बढाउनको लागि हामीले ग्राहक समक्ष नजिक पुग्नको लागि ग्राहकसेवा केन्द्र स्थापना गदैछौ । हाम्रो सेवा नेपाल भरी पुयाउँ भन्ने नै हो । सबै ठाँउमा सहज र सरल रुपमा गुणस्तरीय सुविधा दिने हाम्रो प्रयास हो । हाम्रो त्यसमा हामी प्रविधीको पनि प्रयोग गरेर दुर्गम क्षेत्रमा पनि जानको लागि तयारी गर्दै जानेछौ । हाम्रो हरेक कदमको सहयात्री भन्ने नाराका साथ हामी कम्पनी मार्फत सबै क्षेत्रमा पुग्ने प्रयासमा रहेका छौ ।
हामी दक्ष जनशक्ति विकास गर्न र शाखा सजांलको विस्तार गर्न, यातायातमा काउन्टरको व्यवस्था गर्न, ग्राहकसेवा केन्द्र स्थापना गर्न बजारको आवश्यकता हेरेर प्रडक्ट ल्याउने हाम्रो प्रयासमा रहेका छौ । यसका साथै हामी प्रविधीको प्रयोग गरेर बीमा अनलाईन मार्फत गर्न व्यवस्था गदछौ । ई–पेमेन्ट मार्फत पनि बीमा शूल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्न योजनामा ल्याईरहेका छौ ।
रिलायबल लाइफले पायो प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि ट्रिपल बि रेटिङ
व्यतित बीमालेख ५ प्रतिशतमा झार्न सम्भव छ ?
नेपाली बीमा बजारः दाबीको समस्या र समाधानका उपायहरु